साढे ४ अर्ब बढीको १ हजार ५५१ विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रियो, कुन देशबाट कति ? - Arthatantra.com
साढे ४ अर्ब बढीको १ हजार ५५१ विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रियो, कुन देशबाट कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बैशाख मसान्तसम्ममा साढे ४ अर्ब बढीको विद्युतीय सवारी साधान आयात भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको १० महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ५२ करोड ६८ लाख ३ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएको हो ।
उक्त अवधिमा विभिन्न तौल क्षमताको १ हजार ५५१ थान विद्युतीय कार, भ्यान र जीप आयात भएको हो । विद्युतीय सवारी साधान आयातबाट सरकारले १ अर्ब ३३ करोड ४८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ ।
उक्त अवधि सबैभन्दा बढी सवारी छिमेकी मुलुक चीनबाट आयात भएको छ । चीनबाट बैशाख मसान्तसम्ममा २ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय कार, जीप र भ्यान नेपाल भित्रिएको हो । उक्त अवधिमा चीनबाट ८०१ वटा सवारी आयात भएको हो । विभागका अनुसार चीनबाट १०० किलोवाट तौल क्षमताका १४५ वटा र १५० देखि २०० किलोवाटका ६५६ वटा विद्युतीय सवारी आयात भएको हो ।
यस्तै, अर्को छिमेकी मुलुक भारतबाट १०० किलोवाट तौल क्षमता भएका ५५५ वटा सवारी आयात भएको हो । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्ममा १ अर्ब ३८ करोड ४९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय कार, जीप र भ्यान आयात भएको हो ।
त्यसैगरि चालु आवको १० महिनामा गणतन्त्र कोरियाबाट ५६ करोड ६३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सवारी आयात भएको हो । उक्त मुलुकबाट चालु आवको बैशाख मसान्तसम्ममा १०० किलोवाट तौल क्षमता भएका १०४ वटा र १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका ४४ वटा गरि कुल १४८ थान विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएको हो ।
यता, चालु आवको १० महिनको अवधिमा अमेरिकाबाट ७ करोड ८४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको १८ वटा विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएको छ । अमेरिकाबाट १०० देखि १५० किलोवाट तौला क्षमताका १३ वटा, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका १, २०० देखि ३०० किलोवाट तौल क्षमताका २ र ३०० भन्दा बढी तौल क्षमता भएका २ थान विद्युतीय सवारी आयात भएको छ ।
उक्त अवधिमा जापानबाट १० करोड ८८ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको २८ थान ( १५० देखि २०० किलोवाट तौल क्षमताका) कार, जीप र भ्यान नेपाल भित्रिएको हो ।
विभागका अनुसार चालु आवको बैशाख मसान्तसम्ममा फ्रान्सबाट ३४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ थान विद्युतीय सवारी आयात भएको छ ।
वि.सं.२०७९ जेठ १८ बुधवार १७:१६ मा प्रकाशित
News Views: 543
अघिल्लाे कुमारी बैंकले ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल
पछिल्लाे उच्च ब्याजदरको बैंक अफ काठमाण्डूको प्रिमियम प्लस बचत खाता सार्वजनिक,यस्ता छन् सुविधा